निद्रै प्यारो हो कि ? « News of Nepal
निद्रै प्यारो हो कि ?
ऊ बेला वाइस्यालको निकै चर्चा हुन्थ्यो । उस्तै बाघ भनाउँदा हरलाई तह लगाउने भएसी वाइस्याल निकै जाग्याथ्यो । तर खैं आजकल के भा हो कुन्नी त्यसको नाम निशान सुनिन्न । कसैले झुक्किएर स्याल समेत भन्या सुनिन्न । जंगलको मलजलमा हुर्किएको माऊ पार्टी सहर पसेर यतै विलाएर पो हो कि ?
अन्य दलका वाइस्याल हरको हालत पनि उस्तै उस्तै हुन लाग्या छ । धेरै जनरल वार्डमा छन् भने कोही कोमा अनि धेरै चिरनिन्द्रामा पुगिसक्या छन् । अहिले सरकार विरुद्ध डा. केसी र केसी विरुद्ध सत्तापक्ष केही बेसी भएसी प्रतिपक्षी काँग्रेस हल्का जुरमुराएको छ । माऊपार्टीको निन्द्रा खुलेर हो क्यार सो दलका तरुण र केही तन्नेरी पनि सडकतिर आङ तन्काउन थाल्या छन् ।
आङ तन्काउनेहरको निन्द्रा खुलिसक्या हो कि कोल्टो फेरेर अझै १÷२ निन्द्रा भ्याउन बाँकि छ, धरहराले बुझ्न सक्या छैन । मध्य जाडो, अनि विहानपखको निन्द्रा त निकै प्यारो पो हुन्छ है । ‘आ…होस्, एक छिन त सुतिन्छ, घाम झुल्कियोस अनि उठम्ला…’ भन्दै न्यानो सिरकमा गुटमुटिनेहरु सहर बजारमा बाक्लै हुन्छन् । त्यसैले तरुण र तन्नेरीले अहिले तन्क्याएको आङ कस्तो हो, धरहराले अझै बुझ्न सक्या छैन, कतै पाठकवृन्दलाई पो थाहा छ कि ?